Nhicha Franchises maka ire | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Nhicha Franchises
Techclean bidoro ịzụ ahịa na 1983 wee bụrụ onye isi ndị UK kachasị na usoro ịdị ọcha. Techclean nwere ike ịbanye n'ụlọ dịka…
Franchise Ọcha kacha ọhụrụ
Mkpochapu ahịhịa ọka
Ọkachasị nhicha ahịrị biya kemgbe 2006 methodszọ anyị nwalere na nke anwalere, ya na obere ngwa anyị pụrụ iche, igwe na-agwakọta mmiri, ...
Techclean bidoro ịzụ ahịa na 1983 wee bụrụ onye isi ndị UK kachasị na usoro ịdị ọcha. Enwere ike ịnabata Techclean dịka ụlọ…
Ọtụtụ ndị mmadụ n'ụbọchị taa bụ germaphobic, ọ bụ ya mere oke mkpa ọrụ nhicha na-abawanye kwa afọ. Yabụ na ị nwere ike na-eche n'obi gị gịnị ị ga-esonye n'ụlọ ọrụ a na-eto ngwa ngwa?
Statistics gburugburu ụlọ ọrụ nhicha.
Ugbu a, m ga-ekekọ ụfọdụ ọnụ ọgụgụ anakọtara gburugburu ụlọ ọrụ nhicha n'ime afọ ndị gara aga iji gosipụta na ụlọ ọrụ ya dị oke mma itinye aka na ya.
Kemgbe 2010, ngalaba nhicha ahụ ahụla ihe na-abawanye na 21% na UK - ọnụ ọgụgụ dị nso na-agbanwe agbanwe na ụwa niile.
Ngalaba nhicha nhicha na UK ewegharala mmadụ 700,000. Na USA, enwere ihe karịrị nde mmadụ nde 3.2 na-arụ ọrụ na mpaghara nhicha, yana ịrịọ n'akụkụ ụwa niile maka ọrụ nhicha.
Dika akuko MTW Research siri kwuo, ngalaba nhicha nhicha ruru ihe kariri £ 3bn nke akụnụba UK.
Ihicha ga-abụrịrị nnukwu ihe na mba niile dị n'ụwa. Ọ bụ ngalaba nke na-agaghị anwụ anwụ.
Gịnị ka ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi?
O doro anya na enwere nnukwu agụụ maka ọrụ nhicha ọ bụghị naanị na UK na USA mana n'ofe ụwa niile. Bụrụ na ọ na-asacha ngwa ahịa kọmputa dịka Techclean, na ọrụ nhicha ụlọ na ọfịs, ugbu a bụ oge kachasị mma iji nweta ahịa a na-enye ọ .ụ.
Choo nhicha nhicha nhicha n'iji Franchiseek ta.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ohere kachasị mma nhicha nhicha zuru ụwa ọnụ. Mgbe ahụ m na-adụ gị ọdụ ka ị nwee ezigbo nyocha site na ụdị nhicha ọcha anyị iji chọta ohere maka ọrịre nke ga-adabara gị. Ozo ma oburu na ibughi onye na akwado ihe nhicha. Mgbe ahụ ana m akwado gị ka ị na-agagharị na ndekọ aha franchiseek niile na-enye ọtụtụ ohere na-atọ ụtọ ọnụ ahịa aha.
Soro Mgbanwe Hog Roast Banyere itgba Pig nke Guzosiri ike karịa afọ 25, Spitting Pig bụ ndị kacha hog na UK…
Ohere ohere nke TRIB3 Otu dị n'azụ TRIB3 nwere oke mmụọ na-eme ka ndị mmadụ gbakọta ọnụ ka ha wee nweta ahụmịhe nke ọkwa ha ọzọ,…
Anyị na-enwe agụụ mgbe niile banyere ije kọfị ozi kachasị mma kachasị mma kemgbe ụbọchị mbụ. Ọ bụ otú ọtụtụ n'ime anyị…